#‘लकडाउन’ | Suvadin !
Suvadin Media 376 0
लकडाउनमा दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ बाट ऋणीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न ब्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई गत चैत मसान्तमा कायम ब्याजमा छुट दिन निर्देशन दिएको हो । बैंकका अनुसा...
Suvadin Media 248 0
लकडाउनका बीच किन जाँदैछन् मानिसहरु घर ?
काठमाडौं । कोभिड-१९ कारण लकडाउन हुँदा उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएकाहरुको अहिले आफ्नो घर फर्किन लोकन्थली, जगातीलगायतका ठाउँमा भिड लागेको छ । उपत्यकामा लकडाउनले जनजीवन प्रभावित हुँदा आफ्नो घर फर्किनेको भिड लागेको हो । विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहहरुले सामाजिक सञ्चाल मार्फत सूचना जारी गर्दै आ-आफ्ना स्थ...
लन्डन । बेलायतमा लकडाउन कम्तिमा तीन हप्ताका लागि लम्बिने भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा लिने प्रयास स्वरुप लागु भएको लकडाउन कम्तिमा थप तीन हप्ता बढाउने निर्णय भएको बेलायती विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिले नै लक...
Suvadin Media 86 0
काठमाडौं । सरकारले लकडाउनलाई थप कडा गर्ने भएको छ । अब यदी लकडाउन उल्ल्घंन गरे सरकारले जेलसम्म पठाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई १ महिनासम्म जेल पठाउने...
लकडाउन कडाइमा कुनै सम्झौता नगरौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनलाई कडाइका साथ पालना गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शनिबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडिओ कन्फरेन्स गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनमा कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कडाइका साथ पालना गर्न नि...
Suvadin Media 131 0
काठमाडौं । चैत ११ गतेबाट भएको लकडाउनका कारण काठमाडौंमा रोकिएकाहरूलाई शुक्रबार र शनिबार उपत्यका बाहिर जान दिइने भएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले यो दुई दिन उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय गरेको हो । लक डाउन लम्बिएपछि कतिपय व्यक्तिहरू हिँडेरै काठ...
बिहानै 'लकडाउन' उल्लघंन गर्ने २ सय जना पक्राउ, अब दुईघण्टा सडकमै उभ्याइने
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको सम्भावित महामारीलाई रोक्न सरकारले गरेको 'लकडाउन'को उल्लघंन गर्ने ५५ महिला र १५५ जना पुरुषलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले आइतबार एकाबिहानै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले हिजो दिनभर उपत्यकामा 'लकडाउन' उल्लघंन गर्ने करिब ५...
काठमाडौं । लकडाउनको तेस्रो दिन आज पनि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका शहर सुनसान छन् । सरकारको निर्देशनको पूर्णपालना गर्दै मानिसहरुले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयासलाई साथ दिएका छन् । सरकारले चैत ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म देशभर लकडाउन गर्दै अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन भनेको छ ।...
Suvadin Media 269 0
भारतमा आजदेखि तीन साताका लागि लकडाउन
नयाँदिल्ली । भारत आजदेखि तीन साताका लागि लकडाउन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा तीन साता लकडाउन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री मोदीले देशका नाममा सम्बोधन गर्दै मंगलबार मध्यरातदेखि तीन साता भारतमा राष्ट्रिय लकडाउन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले यसअघि १९ मार्चमा देशव...
यी हुन् ‘लकडाउन’ अवधिका लागि सरकारले जारी गरेका ८ आदेश
काठमाडौं । देशैभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण फैलिने खतरा बढ्दै गएपछि सरकारले आज (मंगलबार) बिहान ६ बजेदेखि देशव्यापी बन्द अर्थात् लकडाउन गरी आठ आदेश जारी गरेको छ। संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको आदेशमा नागरिकले के गर्न हुने के नहुने विषय उल्लेख गरिएका छन...